MACLUUMAADKA TARANKA EEYGA LABMARANER IYO SAWIRO - EEYAHA
Macluumaadka Taranka Eeyga Labmaraner iyo Sawiro
Labrador Retriever / Weimaraner ey isku dhafan oo isku dhafan
Casey (bidix) eeyaha Labmaraner ee isku dhafka ah (Labrador / Weimaraner mix) dhammaantood waxay ku koreen 1 sano jir, iyadoo Cesraa (midig) buluug saafi ah Weimaraner)
Cocker spaniel xadka isku darka collie
Labmaranerku maahan eey saafi ah. Waa iskutallaab udhaxeysa Labrador dib u habeyn iyo Weimaraner . Habka ugu wanaagsan ee lagu go'aamiyo dabeecadda noocyada isku dhafan ayaa ah inaad ka raadiso dhammaan noocyada iskutallaabta isla markaana aad ogaato inaad ka heli karto isku-darka mid kasta oo ka mid ah astaamaha laga helo nooc kasta. Maahan in eeyeyaashan eyda isku dhafan ee la dhalayey yihiin 50% saafi ah ilaa 50% daahir ah. Aad bay caan u tahay in kuwa wax soosaara ay tarmaan iskutallaabno jiil badan .
Naadiga Isku-dhafka Canine ee Mareykanka = Labmaraner
Diiwaanka Taranka Nakhshadeeye = Labraraner
Naadiga Naqshadeeyaha Eeyaha Kaynka Naqshadeeyaha = Labmaraner
Diiwaan Geliyaha Cunnada Caalamiga ah®= Labmaraner
'Kani waa eeydayda Coletrane, Weimador oo shan jir ah. Wuxuu xubin ka ahaa qoyskeyga tan iyo markii uu ahaa eey yar, labadiisii ​​sano ee ugu horreysay na wuxuu ahaa mid qallafsan Uma maleynayo inaan ogaanay imisa jimicsi iyo edbinta uu u baahnaa maalin kasta. Wuxuu ahaa mid aad u caqli badan oo wuxuu bartay oo dhan oo ka mid ah amarrada caadiga ah muddo gaaban gudaheed, laakiin isna wax badan buu muujinayey dabeecadaha eyga xukuma tan iyo bilowgii Xitaa ka dib markii aan bilownay inaan isaga socodsiino maalin kasta, dabeecadihii ayaa sii socday. Wuxuu badanaa ciyi jiray oo u oori jiray wuxuu doonayay, wuu lahaa dhaqan xumo xadhig , wuu jeclaan lahaa bood boodo markii shisheeyayaal soo booqdeen , iyo ugu xumaa ee wuxuu doonayay oo dhan guux hadaad dhibtay ku seexdo sariirtiisa ama haddii uu wax haysto waa inuusan lahayn. Waxaa jiray kala duwanaansho badan oo xagga fikirka ah oo ku saabsan sida loola macaamilo arrimaha markaasna anigu gurigayga kuma sii noolaan. Aabbahay wax badan buu isku dayay qaylo iyo qaylo , isaga oo ka saaray qolka. Hooyaday way dayday isaga aad u jecel iyo ku soo noqnoqoshada amarrada si isdaba joog ah oo aan waxba ka tarin. Baahnayn in la dhaho, MA AHA inuu helayo jihada joogtada ah oo haboon. Markii aan ku soo noqday guriga si aan u caawiyo daryeelka ayeeyday oo waalidkay kula nool hadda, waxaan bilaabay inaan dareemo inay jirto dariiq ka wanaagsan. Waxaan bilaabay inaan aqriyo buugaag badan oo ku saabsan tababarka eyga, ugu dambeyntiina waxaan ka ogaaday Cesar. Waxaan bilaabay inaan dabaqo farsamooyinkiisa waana layaabay. Xiriirkii aan lalahaa eyga ayaa runtii isbadalay. Aniga ayaa ku hogaaminaya xirmo socod maalin kasta iyadoo wax yar la sixi waayo, wuu i ixtiraamaa oo marar dhif ah haddii aan waligood ka horyimaado xeerarka iyo xuduudaha aan u dejiyey. Sawirka labaad waa Coletrane oo deggan sida ugu macquulsan oo ay noqon karaan laba ilma adeer oo hal sano jir ah. Waxaan jeclaan lahaa inaan dhaho reerka intiisa kale waxay ahaayeen kuwo isku mid ah sidaan isku dayo. In kasta oo aanan si buuxda ugu guuleysan iyaga siyaabaha Cesar, farqiga u dhexeeya sida eygu iigu jawaabo aniga iyo iyaga ayaa muuqda oo si tartiib tartiib ah ayuu u keenayaa (iyo Coletrane).
'Nolosheena Coletrane xaqiiqdii marwalba may ahayn socod lugeyn jardiinada dhexdeeda, waxaana wali jira shaqo badan oo inbadan la qabto. Kuma talin lahaa iskudhafkan qof raba inuu raaco wehel fudud oo socda. Waa firfircoon yahay, ula kac ah mararka qaarkood , oo had iyo jeer tijaabin kara milkiilayaashiisa (maxaa ka dhigaya joogtaynta aad muhiim u ah). Laakiin sidoo kale isagu waa jacayl, daacad, caqli badan, iyo mid ka mid ah eeyaha ugu quruxda badan magaalada! Wuxuu waligiis xubin ka noqon doonaa qoyskeena, waana sii wadi doonaa inaan raaco hababka Cesar si aan u hubiyo inuu nolol farxad leh oo miisaaman ku haysto gurigeenna. '
adhijirka jarmalka alaskan malaamute mix
Coletrane Weimador (Labmaraner) oo jira shan sano, sida deggan sida ugu macquulsan u noqon kara laba ilma adeer ah oo hal sano jir ah
Rosco the Lab / Weimaraner mix (Labmaraner) eey yar oo qiyaastii ah 5 ½ bilood jir
'Waxaan qaaday sawirkan isla markii aan keenay guriga Dolche markii ugu horeysay. Dolche waa labo-iyo-toban jir Labmaraner ah, oo runtii aad ugu fiican carruurta oo aad u cod badan. Wuxuu leeyahay dabeecad aad uwanaagsan oo guriga dhexdiisa kuma faano, ilaa uusan socon ilaa maalintaas . Si kastaba ha noqotee isagu wuxuu u baahan yahay waxyaabo badan calalinta alaabta lagu ciyaaro (kan uu jecel yahay waa shey cufan leh). Waxaan dareemayaa in tababarka uu noqon karo mid weyn lamaane orod , waxaana aaminsanahay inuu dheelitiran yahay maxaa yeelay waxaan isku dayayaa inaan ka caawiyo inuu barto soohdimihiisa. Waan daawadaa Eyga Whisperer waxaanan isku dayaa inaan ku dabaqo farsamooyinkiisa waxyar ka dibna waxaan arkaa natiijooyin dhab ah.
Boris the Labmaraner (Weimaraner x Lab cross) eey yar 5 bilood
Boris the Labmaraner (Weimaraner x Lab cross) eey yar 5 bilood oo daaqada ka fiirinaya
boston terrier chihuahua eeyo isku dhafan
Casey the Labmaraner puppy at 6 toddobaad (Lab / Weim cross)
Casey the Labmaraner puppy at 6 toddobaad jir— 'Hooyadeed waa shaybaar shukulaato saafi ah aabeheedna waa Weimaraner saafi ah. Iyadu waa DOLL !!!! '
Eeg tusaalooyin dheeri ah ee Labmaraner
Liistada eeyaha Weimaraner ee Isku-dhafan
Cocker spaniel isku darka pinscher Ghadafi
isku dhafka ingiriiska american bulldog
madow iyo caddaan dachshund piebald
dachshund iyo sheybaarada isku qasan eeyaha
xiisaha of pitbulls buluug sanka